Mahatratra ny halehiben’ny fahafenoan’i Kristy
«Mandra-pahatongantsika rehetra ho amin'ny firaisan 'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny Zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben 'ny fahafenoan Kristy.» - Efes. 4:13.
Arakaraka ny handrosoanao ao amin'ny fiainana kristianina no hitomboanao tsikelikely mankany amin'ny fahafenoan'i Kristy. Amin'ny alalan'ny fanandramanao no ahafahanao manaporofo ny halava, ny velarana, ny halalina ary ny haavon'ny fitiavan'Andriamanitra. Ary amin'izany dia hahatsapa ny maha tsinontsinona anao ianao. Tsy afaka ny hitaky toetra tonga lafatra ianao fa ny azonao atao dia ny manandratra ny fahatanterahan'ny Mpamonjinao. Rehefa mazoto manao fanandramana ianao dia hitombo amin'ny fahalalana an'i Jesôsy ka handroso any amin'ny fahaiza-manetry tena (...)
Ny fitiavana an 'Andriamanitra amin'ny fo manontolo sy ny fitiavana ny manodidina dia tena fanoloran-tena marina. Ny faharesen-dahatra amin'ny Baiboly no hitarika ny tsirairay amin'ny fanaovana asa maharitra, lavitry ny fitiavan-tena, ny fanandratan-tena, sy izay mety ho fieboeboana sy fiheveran-tena ho masina. Raha tena resy lahatra ny amin'Andriamanitra ianao dia hanana hery mahery vaika mitarika ho any amin'ny fahamarinana. Ny fahafantarana ny tena dikan'ny hoe Kristianina dia hahatonga anao ho fitahiana na aiza na aiza alehanao. Na iray na roa na dimy ny talenta anananao dia ampiasainao amim-pahatokiana izany ho fanompoana Ilay nanolotra izany taminao.
Tsy ny hahatonga ny olona hidera anao noho ny teny mamy lazainao sy ny asa mahafa-po ataonao izay avy amin'ny fahazavana ao aminao akory no tanjon'Andriamanitra fa ny hanandratana sy hanomezam-boninahitra Ilay Mpahary ny zava-tsoa rehetra. Fony teto an-tany i Jesôsy dia nanome ohatra ny olona tamin'ny toetrany nandritra ny androm-piainany. Endrey ny hakelin'ny fahefan'ny tany izay nanefy Azy araka ny zava-misy eto! Very maina avokoa izany. — RH, 6 Oktôbra 1888.
Tsy afaka ny hijanona eo amin'ny misy anao ianao fa na ianao mandroso na ianao mihemotra.(...) — TFC 5:264,265.